राष्ट्रिय – Page5– BIG FM 101.2 MHz
Home » राष्ट्रिय (page 5)
Anup Poudel राष्ट्रिय
काठमाडौँ भदौ २५ । निकै महत्वका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको विराटनगरस्थित गोबरग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा आएको दुई सातामै बिग्रिएको छ। अघिल्लो आइतबार (१७ भदौ) मा परेकोे पानीले ग्याँस उत्पादन गर्ने स्थानमा क्षति पुर्‍याएपछि एक सातादेखि बन्द भएको हो। विराटनगर महानगरपालिका १४ जतुवास्थित श्रीकृष्ण गौ सेवा सदनमा रहेको गोबर ग्याँस प्लान्टको ‘मेम्ब्रेन’ मा समस्या आएपछि उत्पादन रोकिएको स्रोतले बताएको छ …
अपडेट: हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु, एक जीवितै
गोरखाको सामागाउँबाट काठमाडौंका लागि उडेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टर धादिङ नभई नुवाकोटमा दुर्घटना भएको खुलेको छ। नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाका अनुसार हेलीकोप्टर नुवाकोटको मेघाङ गाउँपालिका ४ मा दुर्घटना भएको हो। हेलिकोप्टरका पाइटलसहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ। सोही हेलीकोप्टरमा सवार डोल्मा आनी भने जीवितै रहेको बताइएको छ। उनको उद्धारको प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनायो। सामागाउँबाट उडेको उक्त हेलीकोप्टरमा पाँच जना …
हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त: अहिलेसम्मको अपडेट
गण्डक न्युज । गोरखाबाट काठमाडौं उडेको अल्टिच्युड एअरको हेलिकोप्टर धादिङको जंगलमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार हेलिकोप्टर धादिङको सत्यदेवी जंगलमा दुर्घटना भएको अवस्थामा भेटिएको छ । 9NALS कल साइन भएको उक्त हेलिकोप्टर शनिबार बिहान ८ बजेर ५ मिनेटदेखि सम्पर्कविहीन भएको थियो। हेलिकोप्टर क्याप्टेन निश्चल केसीले उडाइरहेका थिए । सो हेलिकप्टरमा एक जापानी सहित …
हेलिकोप्टर दुर्घटना: एक यात्री उछिट्टिए बाँचे,खोजी कार्य जारी
२३ भदौ, काठमाडौं । शनिबार बिहानदेखि हराईरहेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टरका एकजना यात्री उछिट्टिएर बाँचेका छन्। राम्रोसँग बोल्न नसकेका उनले हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएपछि आफू बाँचेको जानकारी नेपाली सेनालाई दिएका छन्। उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार हेलिकोप्टर नुवाकोटको सामरी भन्ज्याङ दक्षिण र धादिङको बैरेनी भन्दा उत्तर दुर्घटना भएको जानकारी ती यात्रीले दिएका छन्। ‘उनले आफ्नो नाम पनि राम्रोसँग भन्न सकेका छैनन्, धेरै बोल्न सक्ने …
कस्तो अचम्म ? अभियन्ता सञ्जेलको बिहे ३ सय रुपैयाँमा सकियो ! १० जना मात्र जन्ती !
१८ भदौ, काठमाडौं । शिक्षा अभियन्ता उत्तम सञ्जेलले ४१ वर्षको उमेरमा बिहे गरेका छन् । उनले गुहेश्वरी मन्दिरमा अत्यन्त साधारण तरिकाले सुन्दरीजलकी कला अधिकारीसँग सोमबार बिहान बिहे गरेका हुन् । सामाजिक अभियन्ता सञ्जेल र अधिकारीले अत्यन्तै कम खर्चमा बिहे गरेर फजुलखर्चीहरुलाई चुनौती दिएका छन् । बेहुला उत्तमले ‘समता स्कुल इन्डिया’ लेखिएको टिसर्ट लगाएका थिए । खुट्टामा चप्पल थियो । बेहुली …
अब जातीय भेदभाव गरे दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति !
भदौ १८, काठमाडौं । मानवीय सभ्यताविरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानून समयानुकूल बनाई दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिलाई कडा तुल्याउने विधेयक सदनमा पेश गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकमा कसुरको प्रकृतिअनुसार कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई रु …
पोखरेली प्याराग्लाइडरले राखे देशको नाम, एशियाडमा रजतसँगै पदकको खडेरी टर्यो (भिडियो हेर्नुहोस्)
Ranjan Adhikari Chhetri खेलकुद, राष्ट्रिय
पोखरा । नेपालले इन्डोनेशियामा जारी १८ औं एसियाली खेलकुदमा ११ औं दिनमा पदकको खडेरी चिर्दै प्याराग्लाइडिङबाट रजत पदक हात पारेको छ । एशियाली खेलमा पहिलो पटक समाबेश प्याराग्लाइडिङ क्रस कन्ट्रि तर्फको पुरुष टिम इभेन्टमा इतिहास रच्दै रजत पदक हात पारेको हो । नेपाल जापान भन्दा जम्मा २७ अंकले पछि पर्दै रजत पदकमा चित्त बुझाएको हो । पाँच दिन सम्म जारी रहेको …
१ भदौ ,काठमाडौं । नेपालमा शुक्रबारदेखि नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएको छ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी कार्यान्वयनमा आएका नयाँ ऐनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि कानून उल्लंघन गरे कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा हुने नेपालीले नेपाली बिरुद्ध नै कसूर गरेमा देश भित्रै कसूर गरे सरह सजाय हुनेछ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा नेपाली नागरिकले नेपाल बाहिरै नेपाली नागरिक बिरुद्ध …
काठमाडौँ,३० श्रावण २०७५ । काठमाण्डौमा यही भदौ १४ र १५ गते बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउन लागेका छन् । सम्मेलनको क्रममा यहाँ विभिन्न आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमका साथै लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गर्ने तयार पनि थियो । भारतीय दूतावास र नेपाल सरकार त्यसको तयारीमा जुटिसकेका थिए । तर, अन्तिम समयमा आएर लुम्बनी …
नेकपाको बन्दले पोखरा ठप्प,एक ठाउँमा भेटियो शंकास्पद वस्तु
Anup Poudel राष्ट्रिय, स्थानीय
पोखरा, साउन २९ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको असर पोखरामा पनि असर देखा परेको छ । केही फाट्टफुट्ट मोटरसाईकल र अत्यावश्यक गाडीहरु बाहेक सार्वजनिक यातायात ठप्प छ । पसलहरु भने बन्द नै रहेका छन् । विप्लवको बन्दले स्कुल तथा कलेजहरु पनि बन्द छन् भने पोखरा सुनसान छ । आजै गुरुङहरुको महान चाड ट्होंटे पर्व भएकोले …